အလုပ်သင် - Prairie State Legal Services
Prairie State သည် ၎င်း၏ဒေသခံရုံးတစ်ခုစီ (Bloomington၊ Galesburg၊ Joliet၊ Kankakee၊ Ottawa၊ Peoria၊ Rockford၊ Rock Island၊ Waukegan၊ Woodstock နှင့် West Suburban) နှင့် အောက်ဖော်ပြပါ အထူးပရောဂျက်များတွင် စာသင်နှစ်နှင့် နွေရာသီ ဥပဒေကျောင်းသား အလုပ်သင်များကို ပုံမှန်လက်ခံပါသည်။ : အိမ်ပိုင်ရှင်များပရောဂျက်အတွက် တရားဝင်အကူအညီ (အနောက် ချီကာဂိုနှင့် Waukegan); ဝင်ငွေနည်းအခွန်ဆေးခန်း (အနောက် ချီကာဂို); နှင့် တရားမျှတသောအိမ်ရာစီမံကိန်း (Waukegan၊ Rockford နှင့် Peoria)။
ဥပဒေကျောင်းသားများသည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်ရုံးခန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စီမံကိန်းတစ်ခု၏လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ Prairie ပြည်နယ်တွင်တာ ၀ န်အမျိုးမျိုးကိုဆောင်ရွက်သည်။ ဤတာ ၀ န်များတွင်ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ အသနားခံစာ, စာချွန်လွှာများနှင့်အကျဉ်း၏မူကြမ်း; ဥပဒေရေးရာသုတေသန; နှင့်ညှိနှိုင်းမှု။ (မှတ်ချက် - အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်ဥပဒေ ၇၁၁ အရအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောဥပဒေကျောင်းသားများသည်ပြည်နယ်တရားရုံးတွင်ထပ်မံတက်ရောက်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ) အလုပ်အားလုံးကိုအတွေ့အကြုံရှိရှေ့နေကကြီးကြပ်သည်။ Prairie ပြည်နယ်သည်အလုပ်သင်များအားမကြာခဏလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။
အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသောကျောင်းသားများအနေဖြင့်မရသောအနေအထားကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်း Prairie State မှနားလည်သည်။ PILI နှင့်အခြားရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူများနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပဒေအရကျောင်းသားရာထူးအတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ ဤရာထူးများ၏အရေအတွက်နှင့်တည်နေရာသည်လက်ရှိရန်ပုံငွေအခွင့်အလမ်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ Prairie ပြည်နယ်သည်ပြင်ပရန်ပုံငွေရှိသည့်ကျောင်းသူ / သားများထံမှငွေချေးယူထားသူများသို့မဟုတ်သူတို့၏အချိန်အားဆန္ဒအလျောက်ဆန္ဒရှိသောဥပဒေကျောင်းသားများထံမှအလုပ်သင်လျှောက်လွှာများကိုလည်းကြိုဆိုသည်။
ဥပဒေကျောင်းသား အလုပ်သင် လျှောက်ထားရန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွင့်ထားသော လျှောက်လွှာဝင်းဒိုးတွင် ဤစာမျက်နှာသို့ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်သွားပါ။. သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက Prairie State ၏ အလုပ်သင်ညှိနှိုင်းရေးမှူးများထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
Prairie ပြည်နယ်သည်စာသင်နှစ်နှင့်နွေရာသီအလုပ်သင်များအား၎င်း၏ရုံးများ (Bloomington, Galesburg, Joliet, Kankakee, McHenry, Ottawa, Peoria, Rockford, Rock Island, Waukegan နှင့် West Suburban) တို့တွင်ပုံမှန်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည်။ အိမ်ပိုင်ရှင်စီမံကိန်းအတွက်အကူအညီ (West Chicago နှင့် Waukegan); အနိမ့်ဝင်ငွေခွန်ဆေးခန်း (အနောက်ချီကာဂို); မျှတသောအိမ်ယာစီမံကိန်း (Waukegan, Rockford နှင့် Peoria) ။
Intern များသည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံအဆင့်နှင့်ရုံးခန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စီမံကိန်းတစ်ခု၏လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ Prairie ပြည်နယ်တွင်တာ ၀ န်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ရှေ့နေများသည်အမှုသည်များအနေဖြင့်ဖောက်သည်များကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ အသနားခံစာမူကြမ်းများ၊ ဥပဒေရေးရာသုတေသနပြုခြင်းများနှင့်ရှေ့နေများအားရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
Prairie ပြည်နယ်သည်ပြင်ပရန်ပုံငွေရှိသည့်ကျောင်းသူ / သားများထံမှသို့မဟုတ်ကျောင်းသားများ၏အချိန်ကိုစေတနာအလျောက်ဆန္ဒရှိသောဘွဲ့ကြိုနှင့်ဥပဒေပညာရှင်များထံမှအလုပ်သင်လျှောက်လွှာများကိုကြိုဆိုသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ငါတို့ဘွဲ့ကြိုနှင့်ဥပဒေပညာရှင်ကျောင်းသားများအားပေးဆောင်အလုပ်သင်မတတ်နိုင်ကြသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Prairie ပြည်နယ်၏စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၀ န်ဆောင်မှုဒါရိုက်တာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ (အီးမေးလ် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်])
မှတ်ချက်။ ။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်အဝေးမှအလုပ်လုပ်နေရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးများကိုပြန်လည်မဖွင့်မချင်းဘွဲ့ကြိုနှင့်ဥပဒေပညာရှင်အဆင့်ကျောင်းသားများ၏အလုပ်သင်လျှောက်လွှာအသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိမ်ရာအတွက် ရှေ့နေများကော်မတီသည် ဇွန်လ 4859 နှင့် 16 ရက်နေ့၊ 30:5 မှ 00:8 နာရီအထိ Chicago, IL ရှိ CHA Family Investment Center, 00 South Wabash တွင် ဖယ်ရှားခြင်းတံဆိပ်ခတ်ထားသောဆေးခန်းများကို လက်ခံကျင်းပနေပါသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီရင် တွေ့ဖို့ စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။ ရက်ချိန်းယူရန် နေရာတစ်ခု ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါမည်။ ပိုမိုလေ့လာရန်၊ ဤနေရာတွင် bit.ly/376O6Ru	... ပိုကြည့်ရှုပါအောက်ကိုကြည့်ပါ
LCBH Eviction Sealing Clinics၊ မေ 26၊ ဇွန် 16 နှင့် 30 - Prairie ပြည်နယ်တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ
ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိမ်ရာအတွက် ရှေ့နေများကော်မတီသည် မေလ ၂၆ ရက်၊ ဇွန် ၁၆ နှင့် ၃၀ ရက်၊ ၅း၀၀ မှ ၈း၀၀ နာရီအထိ ချီကာဂိုမြို့ရှိ CHA Family Investment Center၊ 4859 South Wabash တွင် နှင်ထုတ်ခြင်းတံဆိပ်ခတ်ထားသောဆေးခန်းများကို လက်ခံကျင်းပနေပါသည်။ R...